ကြိုးမဲ့ $ 29 အဘို့ဤ charger နဲ့တစ်ပြိုင်နက်သင်၏ iPhone နှင့် Apple Watch က Load - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ "ကြိုးမဲ့ $ 29 အဘို့ဤ charger နဲ့တစ်ပြိုင်နက်သင်၏ iPhone နှင့် Apple Watch က Load - BGR
ကြိုးမဲ့ $ 29 အဘို့ဤ charger နဲ့တစ်ပြိုင်နက်သင်၏ iPhone နှင့် Apple Watch က Load - BGR
Apple က AirPower vaporware ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲရှိလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကြိုးမဲ့အားသွင်းတည်ဆောက်ရန်ထပ်ကြိုးစားကြည့်နိုငျသျောလညျးကြှနျုပျတို့ 2017 သည်အထိပြသတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှဆက်စပ်ပစ္စည်းတည်ရှိဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းတာကသင်တို့အဘို့, ဒီ Multi-device ကိုအားသွင်းအလားတူထုတ်ကုန်အောင်များစွာသောအခြားကုမ္ပဏီများမှုတ်သွင်းခြင်း, ခဲ့ပါသည် ကြိုးမဲ့အားသွင်းဘူတာရုံ Fatwaior21 en ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ သူကဖန်စီသို့မဟုတ်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းလည်းရှုပ်ထွေးဘာမှလုပ်ဖို့မကြိုးစားပါဘူး။ အဲဒီအစားသူကရိုးရိုးတစ်ပြိုင်နက်ကြိုးမဲ့သင့်ရဲ့ iPhone နှင့် Apple Watch ကပြန်အားသွင်းခွင့်ပြုထားတဲ့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုထုတ်ကုန်စာမျက်နှာပေါ်တွင် 20% ကူပွန် Cut နှင့်လျော့နည်း $ 29 ထက်ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းရ!
တစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခု iPhone နှင့်တစ်ဦးကို Apple ပြပွဲအားသွင်း: ကြိုးမဲ့အားသွင်းဘူတာရုံ 1 ယူနစ်အတွက်ဖုန်းကိုအားသွင်းခြင်းနှင့် charger ကိုပြပွဲပေါင်းစပ်။ ဒါဟာတစ်ပြိုင်နက်သင်၏ iPhone နှင့် Apple ပြပွဲအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်အချိန်ကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကပိုက်ဆံကယ်တင်မည်သာ။ [QC 3.0 WALL charger လိုအပ်နေတာကအိုင်တီမပါဝင်ငျ့]
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစား: အဆိုပါကြိုးမဲ့အားသွင်းကြည့်ရှုရန်တယ်လီစကုပ် loader ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ သင်ဖယ်ရှားသို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ကတွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ခရီးသွားများအတွက်အလွန်လက်တွေ့ကျထူးခြှနျ & ဘယ်သူမျှမကပိုပြီး cable ကိုအကိုင်းအခက်။
charger အစာရှောင်ခြင်းကြိုးမဲ့: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးမဲ့ထောက်ခံမှုအားသွင်းသာမန်ကြိုးမဲ့အားသွင်း 5W ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်သည်။ အန်းဒရွိုက် (Samsung ရဲ့ Galaxy S10 / S10 / +9/9/ 8 + / S8 /7အစွန်း / S7 /6အစွန်း / Note6 နှင့်ပိုပြီး) အတွက် 8W ။ iOS အတွက် (iPhone, XS မက်စ / XR / XS / X ကို / + 7.5 / 8) အတွက် 8W ။ စီးရီး iWatch2,5 / 1 /2/3များအတွက်4W က။ [သင်၏ဖုန်းနှင့်တကွကြွလာဆိုလိုသည်မှာမူရင်းဝတ်စုံကိုဒီဝန်များအတွက်သင့်လျော်သောမက, ကပါဝါမှ QC 3.0 WALL charger ကိုသုံးပါ ကျေးဇူးပြု. ] ။ အဆိုပါ FOD သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတစ်ဦးပိုလုံခြုံစောင့်ရှောက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ပေးသည်။
ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အတူအားသွင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးမဲ့အားသွင်းမှု၏ထိရောက်သောအကွာအဝေး6မီလီမီတာထက်လျော့နည်းသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင့်အမှု၏အထူ6မီလီမီတာထက်လျော့နည်းသည်အတိုင်း, သငျသညျအမှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ သတ္တုနှင့်သံလိုက်နှင့်အတူအားလုံးအိမ်ရာဒီ charger နဲ့သဟဇာတမရှိကြပေ။
အာမခံ 12 လနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအားသွင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးမဲ့အားသွင်းစသည်တို့ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှု, Overload ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, overcurrent ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု, သေချာစေရန်မျိုးစုံကာကွယ်မှုစနစ်တွေရှိပါတယ် ဒါဟာအစ 12 လအတွင်းတစ်အာမခံချက်နှင့်အတူကြွလာ။ သင်ကြိုးမဲ့အားသွင်း ပတ်သက်. မေးခွန်းများရှိပါက, သင်အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
လိုက် Twitter ပေါ်တွင် @BGRDeals နောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့် web ပေါ်မှာအများဆုံးခြွင်းချက်သင်အသိပေးထားရန်။ ပမာဏကန့်သတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြပြီးကူပွန်မည်သည့်အချိန်တွင်မကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။ BGR ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ထားရှိအမိန့်အပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ရေစိုခံဓာတ်မီး Anker နီးပါးလည်းတောက်ပဖြစ်ကြပြီး $ 7,99 ထံမှရောင်းချရန်အပေါ်များမှာ - BGR
BGR - ငါအမေဇုံအပေါ်ရတယ်ဒါကအော်တိုအိုး stirrer ကြိုးမဲ့ဂိမ်း changer ဖြစ်ပါသည်
TECH & Telecom1,564